पहाड र तराईमा किन फरक फरक दिन होली मनाइन्छ ? – News Of Global
पहाड र तराईमा किन फरक फरक दिन होली मनाइन्छ ?
फागुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन होलिका दहन गरेसँगै होली मनाउने गरिन्छ । तर तराई भेगमा भने पूर्णिमाको दिन होलिका दहन गरेपनि भोलिपल्ट (प्रतिपदाको दिन) होली मनाउने चलन छ ।
वराह पुराणका अनुसार पाटवास–विलासिनी अर्थात् पाउडरहरू मिलेर बनेको खेलको रूपमा रहेको फागुपूर्णिमा फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइरहँदा तराई भेगमा किन भोलिपल्ट मनाइन्छ त होली ? त्यसभन्दा पहिले यसको पौराणिक पक्ष यस्तो छः